Izithasiselo ze-PVC, i-PVC Heat Stabilizer, i-PVC Stabilizer - i-Aimsea
I-Aimsea Eyasungulwa ngo-1997 enenhlokodolobha ebhalisiwe engu-20 million yuan. Kuyibhizinisi likazwelonke lobuchwepheshe obuchwepheshe elihlanganisa ukuhlanganiswa kocwaningo, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwezinto zokuvikela ze-PVC ezingezona ezinobuthi. Ama-stabilizers asetshenziswa kakhulu emikhiqizweni ye-PVC, enjengentambo nekhebula, imishini yezokwelapha yamathoyizi, imikhiqizo esobala, imikhiqizo enekhalenda, ukufakwa kwamapayipi, amashidi okuhlobisa, izicathulo ezinegwebu, amaphrofayli omnyango newindi, njll. Imikhiqizo ephambili ayinabuthi futhi iyimvelo iziqinisi ze-PVC calcium-zinc ezinobungane. Inamalungelo obunikazi wokusungula ayi-13 nezinhlelo zokusebenza ezingaphezu kwe-30 zobunikazi. Kusezingeni lokuhola lamazwe omhlaba lobuchwepheshe bayo bokusungula. Ziphethe ucwaningo lwesayensi nethimba lobuchwepheshe, i-R & D yamazwe omhlaba kanye nesikhungo sokukhiqiza, esinezinto ezintsha ezizimele kanye nokuncintisana, umugqa wokukhiqiza ozenzakalelayo, amandla wokukhiqiza wonyaka wamathani ayi-40,000, imboni yokuthengisa esezingeni eliphakeme, isebenze kumakhasimende angaphezu kuka-500 amakhambi epulasitiki e-PVC anemvelo .
Isipiliyoni seminyaka engama-23
Bangaphezu kuka-30 izicelo patent
Inhlokodolobha yuan million 20
Izinto zokuzinzisa ezingezona ezinobuthi imishini yezokwelapha ebonakalayo ye-tube injector
Isisimamisi Esingenabuthi Se-Edge Trim Soft And Flexible PVC Gaskets
Isiqinisi sephakethe elilodwa
PVC somfanekiso mat eluhlaza ...
Incazelo Yomkhiqizo I-plasticizer efakwe kumatrix e-PVC inyusa ukuguquguquka kwayo cishe kunoma yiliphi izinga elifunekayo futhi inweba kakhulu ububanzi bezicelo ze-PVC eyenziwe ngopulasitiki. Ikakhulu esetshenziselwa amashubhu (ukudla, ezokwelapha), ama-hoses (ingcindezi, ingadi, ipompo), ama-gaskets, iminyango ye-swing kanye ne-handrails. Ama-Stabilizers anokuqina okuphezulu kokushisa, iphunga elincane, ikhwalithi yomoya enhle yasendlini, ukuhambisana okuhle nama-plasticizers. Izinzuzo Hlangana ne-GB15593-1995 ejwayelekile yezokwelapha; Kuphumelele ...
Ama-stabilizers amahhala anobuthi ...
Incazelo Yomkhiqizo Ngaphandle kwamafilimu aqinile e-PVC, kukhona neqiniso elikhulu lezicelo zeCaZn Stabilizer esekelwe amafilimu e-PVC aguquguqukayo. Imakethe ilawulwa amafilimu afakwe kupulasitiki, yize amafilimu aguquguqukayo angenalutho angena emakethe. Le filimu eguquguqukayo isetshenziswa kakhulu kumafilimu e-lamination, amafilimu wokugoqa iwindi, ifilimu yokuzimela, ifilimu yokukhangisa, amafilimu ancipha, amafilimu wokugoqa imoto, amafilimu wokuphrinta, amafilimu wezimpawu zomgwaqo, amafilimu wedivayisi yamathoyizi, amafilimu ezokwelapha, indwangu yetafula ...
Incazelo Yomkhiqizo Kwaphela amashumi eminyaka, imikhiqizo ebonakalayo ye-PVC ihlukaniswe yaba lukhuni futhi yaguquguquka, ebisetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene. Ngokwezingxoxo zamanje ngokuvikelwa kwemvelo nokusimama, izingxenye zemakethe zesikhathi esizayo zizobhekana nezinselelo ezinkulu. Imikhiqizo equkethe amathini, ezinye izindlela zokuxazulula izixazululo ezingenamathanga zizobucayi kakhulu. Mayelana nalokhu, kuyadingeka ukunaka imithethonqubo ehlukene yezomthetho, efana ne-pharmacopoeia, i-conta yokudla ...
Iphakethe elilodwa liqinisa ukushisa ...
Incazelo Yomkhiqizo Ifilimu eqinile ye-PVC isetshenziselwa ukupakisha umkhiqizo wemithi ilungele ukupakisha amaphilisi, amaphilisi, imijovo, imijovo nezinye izinto eziningi zezokwelapha. Futhi, esetshenziselwa amathoyizi, amagajethi, okumile, izimonyo, amathuluzi, izinto zokudla, umhlobiso, izinto zokwakha nezimboni ezahlukahlukene ngenhloso yokupakisha. Lawa mafilimu akhiqiza ikakhulukazi kusuka ku-Ca / Zn PVC Stabilizers njengoba inesikhathi eside, amandla aqine kakhulu, ubufakazi bomswakama, ukumelana nezinyembezi, cha ...
Ukushisa kweCalcium Zinc PVC ...
Incazelo Yomkhiqizo Amapayipi we-PVC akhishwe kanye ...
PVC Stabilizers ngoba ca ...
Incazelo yomkhiqizo Ama-PVC stabilizers akhiqiza ...
Ukushisa okuzinzile kwe-PV ...
Incazelo yomkhiqizo Calcium Zinc heat Stab ...
Isithambisi se-PVC se-Irr ...
Incazelo yomkhiqizo I-Calcium Zinc PVC S yethu ...
Incazelo yomkhiqizo I-PVC Stabilizer / ukushisa st ...
I-PVC Stabilizer yeWat ...
Incazelo Yomkhiqizo I-Calcium Zinc Isimamisa ...
Ikhwalithi ephezulu ye-PVC Stabi ...
Incazelo Yomkhiqizo I-vinyl eguqukayo iyi-ve ...
Kuhle PVC somfanekiso fo ...
I-PVC Non-Toxic Stabilizer
Isiqinisi se-PVC esingeyona enobuthi yisiqiniseko sokushisa esiphezulu sakamuva esisebenza ngokusobala esingenabuthi esenziwe i-zinc esuselwa ekuhlanganiseni ngokwesayensi ukuhlanganiswa okungezona ubuthi nama-synergists akhethekile. Isiqinisi sokushisa sesikhathi eside se-PVC stabilizer engeyona enobuthi sinokusebenza okuhle, kanye ne-combina ...
Njengamanje, izivikeli zokushisa ze-PVC ikakhulu zifaka usawoti womthofu, i-calcium eyinhlanganisela ne-zinc, i-organic tin, i-antimony ephilayo, izinto zokuvikela ukushisa ezisizayo nezinhlanganisela zomhlaba ezingavamile. Okukhipha okukhulu kunakho konke yi-lead lead stabilizer yendabuko kanye ne-Ca Zn stabilizer eyinhlanganisela. Isiqiniseko seCa Zn siluhlaza ...
I-PVC Heat Stabilizer Ye-Flexbile, I-PVC Heat Stabilizer, I-PVC One Pack Stabilizer, PVC Izithasiselo, Isisimamisi se-PVC, I-PVC Isinqinisi Esingenabuthi,